RSS = Enderera Rakareruka Kubatana? Shambadzira yako Resume Online | Martech Zone
RSS = Dzokororazve Nyore Syndication? Shambadzira yako Resume Online
Chitatu, December 20, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu zvakanaka zve Technorati yakaita seinjini yekutsvaga. Pane nzira mbiri dzekuita izvi, imwe iri kutsvaga neshoko, imwe yacho tag. Ini ndinoda kushandisa tag nekuti inogona kunyatso tarisa izvo zvauri kutsvaga.
Mhinduro yekutsvaga tag ine simba kwazvo. Kune nzira dzinoverengeka dzekuboora pasi kuti uwane zvemukati kuti uwane zvaunoda.
Sarudzo dzekushandisa ma tag hadziperi… kutaura zvazviri, ndatora mukana nhasi ndokutarisa kumusoro tag yacho "tangazve" uye "mcse".
Voila! Iyo inogadzira mashoma kurova:
Ini ndikazotarisa kumusoro "basa" uye "msce":
Wow! Pane zvishoma zvinorova pane izvozvo futi! Handina chokwadi nezvenyu varume asi ini ndinofunga iyi inzira yakakwana, yakakodzera yekushandisa RSS! Nevanhu vanoisa yavo inotangazve pane yavo bhurogu uyezve vashandirwi vachinyorera zvinzvimbo pane yavo yemakambani blog…. Technorati inogona kushandiswa nyore nyore kuchengetedza uye kuona mabasa evashandirwi nevashandirwi emabasa!
RSS = Dzokororazve Nyore Syndication?
Yakanyorwa nemapenzi kuti iverengerwe nembeciles…
May 3, 2007 pa 6: 39 AM
May 3, 2007 pa 11: 26 AM
Ini ndakapa mimwe mienzaniso paResumeBay